नेता वादल ज्यु तपाईको गाउँ जलेर ध्वस्त छ, थाहा पाउनु भएन र ? – Gulmiews
नेता वादल ज्यु तपाईको गाउँ जलेर ध्वस्त छ, थाहा पाउनु भएन र ?
June 15, 2016 Sanju Kauchha
गुल्मी, असार–१ । गुल्मीको दाजाकोट र माझगाउँमा बैशाख १८ गते आगोलागी भएर झण्डै सिङ्गो गाउँ नै जलेर ध्वस्त भयो । आगो लागेकै दिन देखि अहिले सम्म सहयोग र साहनुभुतिका दृष्टीले सिङ्गो देशवासी मात्र नभई अन्य मुलकका नागरिकहरु समेत त्यस गाउँमा घोप्टीए ।
पहडमा आगो लाग्दा तराई दियो छानो शिर्षकको समाचार हामीले सम्प्रेषण गरे लगत्तै थप भाईचाराको अभिबृद्धि भयो, विपदको सहयोग संकलन सम्भवतः देशमै उदाहरणीय बन्यो ।
को पाहडीवासी, को हिमालवासी, को तराईवासी एउटा सानो गाउँ दजाकोटमा सहयोगदातको भिडले दैनिक जसो खुट्टा टेक्ने ठाउँ भएन् । ५० वर्ष अघि दजाकोट छाडेर वुटवल, नारायणघाट पोखरा र काठमाण्डौ वसेकाहरु त्यहाँ पुगेर अपनत्व देखाए , आफु संग जे छ त्यही सहयोग गरे ।
तर त्यसै आफ्नो पुर्खेयौली गाउँ दजाकोट जलेर ध्वस्त भई रहँदा हालको नेकपा माओवादी केन्द्रका दोश्रो शिर्ष नेता रामबहादुर थापा वादल भने त्यति वेला पार्टी एकिकरणको जोड घटाउकै दौडधुपमा थिए ।
गृह मन्त्री शक्तीबहादुर बस्नेत , नेकपा एमालेका सचिव तथा पुर्व मन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा सांसद चन्द्र भण्डारी, माओवादी नेतृ तथा समानुपातिक सांसद सिर्जना तरामु त्यस दजाकोटमा आउँदा रामबहादुर थापा पनि पक्कै उनिहरु संगै आउँछन भनेर आशाको दिप जलाएर बसेको दजाकोटवासी हेलिकप्टर आएर मन्त्री र नेतागण ओर्लिन साथ निरास भएका थिए ।
‘त्यति वेला असाध्धै निरास भईयो, तै पनि पछि आउनु हुन्छ होला अहिले पार्टी एकिकरणको व्यस्ततामा हुनुहुन्छ भनेर वसेका थियौं ,– स्थानियवासी तथा नेता वादलका आफन्त हरिप्रसाद छन्त्यालले भने –‘पार्टी एकिकरण भएको यतिका दिन सम्म पनि उहाँ नआउँदा असाध्धै दुख लागेको छ ।’
नेता वादल मन्त्री भएर दोश्रो जिल्ला परिषद उद्घाटन गर्न सदरमुकाम तम्घास आउँदा उनलाई भेट्न छन्त्याल, उनका कान्छा वुवा मेहर सिंह सोनारी सहित त्यस दजाकोटका वालक देखि बृद्ध सम्म आएका थिए । त्यति वेला नेता वादलले आफ्ना कान्छा वुवामेहर सिंह सहितका आफन्त संग निकै अपनत्व दर्शाएका थिए ।
अहिले उनका कान्छा वुवा मेहर सिंहको झण्डै २५ लाख मुल्य वरावरको पलाष्टर गरेको तिनतले घर जलेर ध्वस्त भई टहरामा वसेका छन् । १० फिट चौडाई र २० फिट लम्वाईको टहरामा मेहर सिंहका छोरावुहारी र आफु बुढाबुढी त्यही विस्तरा, त्यही राखन धरान हुँदा बाहिर वारीको कुनामा खाना पकाउछन् ।
दजोकोटस्थित नेता रामबहादुर थापा (वादल) का कान्छा वुवा मेहर सिंह सोनारीको ध्वस्त भएको घर र अहिले टहराको वास छेउको वारीमा खाना पकाउँदै
आकाशबाट पानी पर्न थालेपछि अँगेनोमा बसालेको खान नपाक्दै उतारेर भित्र लैजाने तर्खरमा लागेका उनका काका मेहर सिंहले भने –‘ तपाईलाई थाह छ माओवादी नेता वादल मेरो छोरो हो तर उ यस्तो हुँदा पनि एकफिटीक भेट्न आएन् ।’ कान्छा वुवा मेहर सिंह र स्थानिय अगुवा समाज सेवी छन्त्यालका अनुसार भेट्न आउनु त परै जावोस् नेता वादलको एककल फोन समेत आएको छैन् ।
नेता वादल प्रति गुनासो गर्ने दाजाकोटवासी धेरै छन् । देश–विदेशका सञ्चार माध्यमले त्यो कहाली लाग्दो दजाकोटको अवस्था दृश्यमा समेत देखाएका थिए । नेता वादलले त्यो हेर्न पाएनन् वा थाह पाएर पनि आफ्नो पुर्खेयौली गाउँ दजाकोटमा साहनुभुतिको औपचारिकता मात्रै भए पनि प्रदर्शन गर्ने चेष्टा गरेनन् त्यो उनैलाई थाह होला ।
त्यही पनि दजाकोटवासीको अन्तिम झिनो आशाका लागि उनको ध्यानकृष्ट गराउन चाहन्छौ कि नेता वादल ज्यु तपाईको पुर्खेयौंली गाउँ दजाकोट जलेर नष्ट भएको पनि दुई महिना पुग्यो । तपाईले थाह पाउनु भएको छैन् र ?
Related Posts	लोकमान प्रकरण सत्ता गठवन्धन तोड्ने खेलः कोईराला...	October 24, 2016	मधेसी मर्चाको माग पुरा गर्ने पर्छ : कोईराला...	October 23, 2016	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website ताजा अप्डेट	राति १० बजे पछि देउसी–भैलो खेले कारबाही हुने